HomeWarrka Af Somaliga AhEnglish NewsWararka CiyaarahaArimaha BulshadaContact Us	Wax Aynaan Wada Ogeyn Ama inaga Maqan an isku Sheegno
Xilli qiyaastii ahaa 1994kii ayaa nin an saaxiib nahay u raacey garoonka diyaarada ee kala beydh oo ay markaa ka soo degeysey inan yar oo ay walaalo yihiin oo ingiriiska ka imaneysey. Markii an inatii soo qaadney ee an mareyno Caabuda ayaanu ka leexanney meel wadadu go’neyd oo dubaabadi ku jirto oo la ii sheegey in xilligii dagaalka ay jabhaddii dhigetay miino. Dubaabadda meesha ku jirta wey ka laalaadaa oo dadka aan hore u arag wey istaagaan oo wuxu ahaa muqaal aan la dhaafi karin.
Markaanu meeshii soo gaadhney ayay inantii yareyd i weydiisey maxaa dariiqa jarey. Anna sidii la iigu sharxey berigii an waddanka soo galey ayaan inantii yareyd uugu sharxan anoo jibeysan oo uuga sheekeynaya sidii jabhaddu Caabuda u gashey ee ay ciidankii u jabisey. Qiyaastii bil dabadeed ayaan inantii yareyd geyney garoonkii kalabeydh si ay uuga dhoofto. Markii an sii soconey ee an mareyno Caabuda ayay inantii yareyd i weydiisay oo ay tidhi sowtan aan weli meeshi la dhisin ee ay weli baabuurtii ka leexaneyso. Markaasaan idhi waa runoo weli lama dhisin. Waxey haddana tidhi “oo maxaa weli la qabanayaa bil ayaa ka soo wareegtee”. Anigii ayaa hoosta iskala sheekeystey oo idhi “bil ayaad ka hadleysaaye, 3 sanadood ayaan dalka joogey oo qofba qof uunbuu uuga sheekeynayey balse la isma weydiin gorma la dhisayaa iyo imisa maalmood ama bilood oo danbe ayey sidan ahaaneysa.
Taariikhdu waxa ay macno sameysaa marka ay mustaqbalka kaa hagto. Macne badan ma sameyso marka wax ad ogtahay oo tegey uun laguugu celceliyo, xataa haddii inta hore ay macno kuu sameyso, marka danbe macnuhu uu ka tagaa. Waxa dhawaan la dabbaal degey 18 May oo aheyd sannad guuradii 22aad ee ka soo wareegtey ku dhawaaqii goonti isku taagga. Waxa iminka la dabbaaldegayaa 27 May oo iyana ah maalin taariikh muhiim ah leh. Arrinta ay aheyd in loo dabbaaldegaa maaha oo keliya in la xasuusto wixii maalintaa dhacey oo keliya. Balse waxa ay tahay mabda’ii taariikhdaasi u taagneyd iyo sida ay wadada uugu xaadheyso mustaqbalka. Mushkiladaha mujtamaceenii heysata wax ka mida iyada oo uu qof walbaa qofka kale u sheegayo wax qofka kale waligiiba ogaa oo aan aheyn wax cusub, taasoo marka danbe macnihii ka qaadeysa taariikhdaas.
Dabaaldegyadan iyo munaasabadaha la xidhiidha waxa haboon in loo adeegsado in lagu dhawaaqo qorshayaal mustaqbal. In la isla sii garto tariikhdaa taariikhdeeda kal danbe waxa inoo qorshe ah, sida aynu wax u aragno. Masalan, dhalinyaradii in badan ayaa shaqo la’aani heysaa ama haya shaqooyin hooseeya oo aan u qalmin, halka ay qaar kalena iminka uun bilaabayaan ama ku jiraan jaamacadihii iyaga oo ku hamiyaya inay mustaqbal wanaagsan iyo shaqo sharaf leh helaan. Taasi waxa ay u baahantahay in xukuumadda, Rugta Ganacsiga (Chamber of commerce), Xarumaha Cilmi-Baadhista iyo Jaamacaduhu la yimaadaan fikrado iyo qorshe sidii tiro dhalinyaro ah loogu abuuri lahaa shaqooyin sharaf leh sanad kasta.
Waxa la joogaa xilligii Badhasaabada iyo Maayarada magaalooyinka ay taariikhahaas uugu dhawaaqi lahaayeen barnaamijyo wax tar leh, dhiirigelinna u noqon kara umadda ay madaxda u yihiin. Taariikhahaa muhiimka ah xuskoodu waa inu farxad u yahay umadda, ha noqoto mushar shaqaalaha loo kordhiyo, ama ha noqoto dadka danyarta ah oo adeegyada caafimaadka laga jebiyo ama bilaash looga dhigo amaba ha noqoto in la yidhaa kal danbe xiligaa xiligeeda haddii natiijo ka soo bixi weydo wada hadalka an la wadno Soomaaliya, dhinac kale ayaan uuga wareegeynaa. Macne badan sameynmeyso inad u dabbaaldegto wax tegey oo ad ku faanto inad qabsatey haddii aadan sii sheegin inay kuu qorsheysantahay.
Waxa ad moodaa illaa hadda in cidamada iyo fanaaniintu ay si fiican uugu diyaar garoobaan oo ay sanadkasta halkii ay joogtey meel ka sareysa geeyaan hawlahoodii. Balse kuligeen sanad kasta heeso iyo xaflado kuma mashquuli karno oo fanaaniin ma wada nihin, ciidamana ma wada nihin oo hub cri ah ma soo wada bandhigeyno.
Bile - Aqoonta u Adeegta Nolosha
StartPrev12345NextEnd	Page 5 of 5	AKHRISO WARARKII KU DHAAFAY IYO WARARKA LA XIDHIIDHA WARKAN ﻿
Rag Isku Baray By Mahad AbukarMonday, 17 June 2013 03:41	DAAWO WARAYSI KULUL Oo XIISO LEH : Gudoomiyaha Baarlmanaanka Soomaaliya Prof Jawaari Oo La Weydiiyay Su'aalo Kulul Oo Ka Dhidid Siiyay ... WARAYSIGA OO DHAMAYSTIRANWednesday, 05 June 2013 06:21	Tacsi Ku Socota Qoyska Iyo Ehelada Marxuum Cali Cismaan Caynaan Oo GeeriyoodaySunday, 16 June 2013 15:12	Tirada Dadka Qaatay Dhalashada Sweden Sanadka iyo Wadamada Ay Ka Soo Kala Jeedaan !! Soomaalida Imise Boqol oo ruux ayaa qaadatay Baasaboorka Sweden 2013 kaSunday, 09 June 2013 14:48	HARGEYSA : Soo Dhaweynta Prof Ahmed Ismaciil Samatar Oo Reer Borama Saaka Safaf Baabuur Ah Kusoo Baxeen iyo Wakhtiga La Sugayo Diyaaradiisu Soo Caga Dhigato Sunday, 02 June 2013 07:38	HARGEYSA:Wasiirka Arimaha Gudaha Somaliland Oo Maanta U Safray Itoobiya Si Uu Heshiis Labo Qodob Ah Ugu Soo Saxeexo Saraakiil Ingiriis Ah Oo Ku Sugan ItoobiyaWednesday, 29 May 2013 20:26	HARGEYSA: Madaxweyne Siilaanyo Oo Booqday Garoonka Kubada Kolayga Hargeysa Oo Tartanka Ciyaaraha Goboladu Ka Socdaan +SAWIRROFriday, 07 June 2013 14:42	Akhriso Gabay Siyaasadeed Ay Iswaydaarsadeen Dawlada Somaliya Iyo Kooxda Kiiniya Ka Dambayso Ee Raas-Kaambooni Oo Dhinacwalba Damaciisa Cadaystay Thursday, 30 May 2013 07:47	Prof Ahmed Ismaciil Samatar Oo Ka Hadlay Wada Hadalka Somalia iyo Somaliland iyo Mida Laga Rabo Somaliland Iney La Timaad Hadii Ay Rabto In .. +VIDEO Saturday, 08 June 2013 14:48	TURKIGA:Kumanyaal Taageerayaasha Raysalwasaaraha Turkiga Dayip Ordegon Oo Madaarka Kaga Hortagay Markuu Kasoo Laabtay Booqasho Uu Ku Tagay Waqooyiga AfrikaFriday, 07 June 2013 04:09	Copyright © 2005 - 2013 Borama News Network by Borama News Network. All rights reserved.